नेपालमा संकट पर्दा कहाँ हराउँछन् विकसित देशमा खटिएका नेपाली राजदूत ? - Vishwanews.com
नेपालमा संकट पर्दा कहाँ हराउँछन् विकसित देशमा खटिएका नेपाली राजदूत ?
काठमाडौं । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट नेपालले कुल १८ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप अनुदानमा पायो । त्यसमध्ये भारतको १० लाख डोज र चीनको ८ लाख डोज खोप थियो । भारतबाट थप १० लाख डोज खोप खरीद गरि आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई लगायो । थप १० लाख डोज खोप डेरिभरी भइनसक्दै भारत आफै कोरोनाको चपेटामा पर्यो । यहाँ दैनिक ४ हजार भन्दा माथि मृत्यु भइरहेको छ ।
यो अवस्थामा नेपालले तत्काल भारतबाट खोप पाउने छैन । खोपको अभावमा नेपालमा मृत्युदर आकासिएको छ । नेपालले पैसा दिएर पनि खोप किन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । दैनिक संक्रमण १० हजार नजिकै छ । नेपालजस्तो थोरै जनसंख्या भएको मुलुकमा यो दर निकै भयाभह अवस्था हो । तर, नेपालले यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मानवीय सहयोग पाउन सकेको छैन । महामारी नियन्त्रणमा मुलुक भित्रको कमजोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य प्रणालीमा अस्तव्यस्तता एउटा पाटो हुन सक्छ, तर कूटनीतिक क्षेत्रबाट समेत निकै कमजोर बनेको छ ।
महामारीको समयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालतर्फ हुनुपर्ने थियो । यसका लागि नेपालले हरेक जसो मुलुकमा आफ्ना दूतहरु राखेको छ । उनीहरुबाट खै नेपालका लागि पहल ?
महामारीको समयमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालतर्फ हुनुपर्ने थियो । यसका लागि नेपालले हरेक जसो मुलुकमा आफ्ना दूतहरु राखेको छ । उनीहरुबाट खै नेपालका लागि पहल ? संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजदूत बनेका आएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा के गरिरहेका छन्, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । न उनी केही सहायताका लागि पहल गर्छन, न सहयोगकै अपिल । यस्तै अवस्था अन्य मुलुकका लागि खटिएका राजदूतहरुमा समेत देखिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजदूत बनेका आएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा के गरिरहेका छन्, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । न उनी केही सहायताका लागि पहल गर्छन, न सहयोगकै अपिल । यस्तै अवस्था अन्य मुलुकका लागि खटिएका राजदूतहरुमा समेत देखिन्छ ।
आफ्नो मुलुक संकटमा पर्दा कुनै काम गर्न सकिन्न भने त्यस्ता राजदूतबाट देशले के अपेक्षा गर्छ ? भोली घर फर्कदा उनीहरुमाथि प्रश्न कसले गर्ने ? कि राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका राजदूतले कुनै सिन्को नभाची घर फर्किए पनि उनी सफल मानिन्छन् ?